Obi ụtọ #tweetsgiving na #indytweetsgiving | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 24, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ka m na-eleghachi anya n’afọ gara aga, ọ dịghị ihe dị ịtụnanya. Inye ekele abụghị ezumike ọ bụla n’ebughị ụzọ kelee Chineke… daalụ-Chukwu! Gọziela mụ na ezinụlọ m n’afọ a. Nwa m nwoke na nwa m nwanyị bụ onyinye kasịnụ m natara na ndụ m. Adịghị m mgbe niile nna kachasị mma n'ụwa - oge ụfọdụ enwere ohere n'ihi azụmaahịa - mana ọ nweghị ike iwepụ mmetụta m. Ọ bụrụ na atụfuola m ya niile echi, ụmụ m ka ga na-amụmụ ọnụ ọchị n’ihu m.
Amalitere m ide ndepụta nke ndị mmadụ na azụmaahịa iji kelee afọ a ma ọ na - atụ ụjọ na m na - achọ ihe dị ka afọ 50, amalitere m ọsụsọ na m ga - echezọ mmadụ! Enwere otu ndị enyi m na-arụkọ ọrụ nke m ga-ekwurịrị, gụnyere Adam Small sitere Ekwentị mkpanaka, Mark Ballard nke Ogbugbo Mallard na Jason Carr si Egwuregwu Bean. Mụ na ụmụ okorobịa a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n’ime ọnwa ole na ole gara aga, ha wee mee m obi ụtọ, nye m nsogbu, ma gbaa m ume ime nnukwu na mma. Gbara onwe gi gburugburu na ndi ezigbo mmadu ma igha aga n’ihu
PS: Mark na-alaghachi San Diego mgbe ekele. Mark ga-agbaghara na m nwute na anyị apụghị inwe ya azụmahịa elu na-aga nke ọma ebe a na Indianapolis… ọ meela a ike ike afọ n'ihi na ọtụtụ.
Daalụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ!
Dị ka ọ dị na mbụ, blọọgụ abụghị nnukwu okwu belụsọ ma ndị mmadụ gere ntị ma sonye Enwere m ekele maka ọgụgụ isi na-eto eto nke Martech Zone na ndị na-ede blọgụ ọhụrụ ndị nyere ụfọdụ ọkwa dị mma na olu dị iche iche ebe a.
Ekele dịrị m Ndị ọrụ ibe
Enweghị m ike ịme akwụkwọ a na-enweghị ekele Chris Baggott na Ngwakọta. Agaghị m enwe ike ịmalite azụmahịa a na-enweghị nkwado ha nyere. Ekele dịrị Kyle Lacy maka iwebata Wiley nke mechara banye n'akwụkwọ m na-ede. Na, n'ezie, ekele Chantelle Flannery maka inyere m aka inweta akwụkwọ ahụ!
ekele Ọnye na -bụ Ryan Cox? onye weputara ndi bekee echiche a ka ha kpata ego maka #tweetsgiving. TweetsGiving bụ mmemme zuru ụwa ọnụ nke na-achọ ịgbanwe ụwa site n'ike nke ekele.
Nọvemba 24? 26, 2009, ihe omume a nke oge 48 mepụtara Epic Change na-enweghị uru na US ga-agba ndị sonyere ume igosipụta ekele ha site na iji ngwaọrụ ịntanetị na ihe omume ndụ. A ga-akpọ ndị ọbịa òkù ka ha nye otu ihe kpatara ya na mmemme ndị a na-eme n'akụkụ ụwa niile maka ịsọpụrụ ndị mmadụ na ihe ndị na-eme ha obi ekele.
Maka ndị gị na Indianapolis, kwụsịtụ Scotty si Brewhouse n'abalị a na ogbe ndịda Indianapolis ebe ụfọdụ ego na-aga bulie.
Nov 24, 2009 na 5:37 PM
Daalụ nke ukwuu maka itinye aka Doug! Dika ikwuru, na mbu anyi n’ekele Chukwu. Mana dị ka ihe dị mkpa, mkpụrụ osisi anyị kwere na Chineke na ịrụsi ọrụ ike na-egosi anyị ihe mere anyị ji bụrụ ndị a gọziri agọzi ma nwee ekele! Enwere m ekele maka ọbụbụenyi gị, nkwado na nkwado ọzọ na #indytweetup #indytweetsgiving #tweetsgiving! Are bụ nwoke n'etiti ụmụ nwoke, enwere m ekele dị ukwuu!
Nov 24, 2009 na 6:10 PM
Douglas, ma kelee gị maka iweta ọtụtụ ihe na tebụl afọ a site na ezigbo ọdịnaya na echiche gị.
Nov 25, 2009 na 3:40 AM
Abụ m onye na - ede blọgụ ibe m na mkpọsa #tweetsgiving nke afọ a. Obi dị m ụtọ na ọkwa gị, ọkachasị foto nke gị na ụmụ gị. Ọ dị ha ka ha nwere nganga maka nna ha! Nwere olileanya na ị nwere onyinye inye ekele!
Nov 25, 2009 na 10:59 PM
Ndewo Doug! Daalụ maka post. Ekele dịrị gị maka ohere ị ga - eji bụrụ otu n’ime ndị na - ede Blog Teknụzụ Teknụzụ na ụdị obiọma na mmesapụ aka gị niile.